Waa maxay mushaharka? Warbixin ku saabsan mushaarka | USAHello
Waa maxay mushaharka? Waa lacag aad u hesho shaqada. lacag bixinta waa qadar go'an oo muddo bil ah ama sannad. Ogow waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato la siiyo mushaar iyo mushaharka.
Shaqooyinka qaarkood waxay leeyihiin saami saacadeed ama todobaadle ah. Heerka ka dhigan tahay xaddiga doolarka aad lacag saacad, maalin, ama toddobaadkii.
shaqooyin kale kuu sheegi sannadle ah (sannadlaha ah) heerka, ama mushaarka. Waxaad ka kasban xaddi go'an muddo sanad ah. Sida caadiga ah, shaqo mushaar sanadle ah oo aad bixin doonto dhamaadka laba todobaad kasta ama bil kasta in aad ka shaqayso. jeegagga The kor ku dari doonaa si mushaar sannad walba haddii aad sii joogo muddo hal sano ah.
Sidee waa mushaar ka duwan mushaar?
mushaharka A waa lacag by saacaddii. saami saacadeed ka dhigan tahay inaad heli qadar go'an saacad kasta oo aad shaqayso. Tan waxaa badanaa loo yaqaan “mushaharka.”
Waxaa jira noocyo kale oo shaqo halkaas oo aad lacag ku dhameysteen shaqo kasta. Tusaale ahaan, inaad heli laga yaabaa in $50 for article kasta oo aad ku qori.
Sidee baan ku ogaan mushahar aan?
Marka lagu siiyo shaqo cusub, waxaad ku baran doontaa lacagtaada. Loo shaqeeyeha wuxuu kuu sheegi doonaa inta aad la siin doonaa ka hor intaadan go'aansan inay aqbalaan shaqada. Or, waxaad ka codsan kartaa shirkadda ama weydii dadka aad u ogaato. Waxaad ku hubin kartaa in aad aragto waxa ay mushahar celcelis ahaan waayo, shaqo iyo magaalada waa. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in bartaan shuruudaha mushaharka ugu yar in gobol kasta.
Maxaa badala mushaar?
Mararka qaarkood, a waqti-buuxa ah ama shaqo waqti-dhiman kuu soo bandhigi doonaa faa'iidooyinka kale iyo sidoo kale lacagta aad qaadato. pay waa muhiim, laakiin waxa ay sidoo kale muhiim ah in aad ka fikirto waxyaabo kale oo, aad. Mararka qaarkood, pay sare waxay noqon kartaa xun yahay mushahar ka hooseeya haddii ay jiraan faa'iidooyinka kala duwan.
Gunnooyinka kale waxaa ka mid ah:
caymiska caafimaadka: shaqo caawin kara lacagta caymiska caafimaadka ee aad adiga iyo qoyskaaga.
qorshaha hawlgabka: shaqo caawin karta inaad lacag u dhigato fariistay. qaar ka mid ah jeegaaga waxaad badbaadin kartaa akoonka hawlgabka ah. Shirkadaha qaarkood waxay ka qayb, ama ay ku darsadaan, xisaabtaada kaydka hawlgabka.
Fasax iyo fasaxa mushaharka: Shaqooyinka qaarkood waxay bixiyaan fasax lacag, maalmoodna waan bukay, iyo fasaxyada. faa'iidooyinka waxay ku kala duwan badan. Weydii cidda aad u shaqayso haddii aad kasban maalmood bixiyay. shaqooyin kale oo laga yaabo badan oo aad ku bixiso halkii saac ah haddii aad shaqayso fasaxyada.
2. Xirfadaha iyo waxbarashada
Haddii shaqo u baahan tahay xirfado badan ama darajo sare, mushahar caadi ahaan sare.
baahida loo qabo shaqo ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karaa lacagta. Haddii ay jiraan wax badan oo shaqo u furan, iyo shirkadaha dhib shaqaaleysato qof, mushaharka laga yaabaa in sare. Haddii ay jiraan dad badan oo kuwaas oo raadinaya shaqo, markaas mushaharka noqon doonaa hoose.
Your goobta bedeli kartaa mushaarka. magaalooyinka iyo gobolada qaarkood waa qaali in ay ku noolaadaan. Kuwa magaalooyinka iyo gobolka bixin kartaa more. magaalooyinka iyo gobolada Qaar ka mid ah way ka jaban yihiin in ay ku noolaadaan. Kuwa magaalooyinka iyo gobolada laga yaabaa inuu bixiyo wax ka yar. Maxaa yeelay, uma baahnid in aad in aad bixiso inta ugu badan ee kirada, cuntada, iyo waxyaabo kale oo, mushaaraadka kala duwan oo u dhexeeya labada dal waxaa laga yaabaa in ka badan siman badan way fiirin.
Xuquuqdaada goobta shaqada